Soo dejisan Adobe Shockwave Player 12.3.5.205 – Vessoft
WindowsNidaamkaKordhintaAdobe Shockwave Player
Bogga rasmiga ah: Adobe Shockwave Player
Adobe Shockwave Player – software ah in loo maqli karo ee multimedia iyo content interactive on internetka. software The aad bay u sii balaadhiyey fursadaha of browser ah in kuu ogolaanayaa inaad tiraa content online oo taageero ka technology 3D ee tayo sare leh. Adobe Shockwave Player falgala ugu daalacashada casri ah, sida Google Chorme, Mozilla Firefox iyo Opera. Adobe Shockwave Player waa software ah inuu u ciyaaro universal xubno badan multimedia.
Galitaanka of content online in tayo sare leh
Loo maqli of content oo taageero ka technology 3D
Isku dhex la daalacashada casri ah
Soo dejisan Adobe Shockwave Player
Faallo ku saabsan Adobe Shockwave Player
Adobe Shockwave Player Xirfadaha la xiriira